Askar Kenyaati ah oo lagu dilay howlgal ka dhacay Husingow. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Askar Kenyaati ah oo lagu dilay howlgal ka dhacay Husingow.
On Nov 29, 2017 278 0
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duulaan waxay ku qaadeen deegaanka Husiingow oo dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Soomliya iyo Kenya, halkaas oo lagu dilay tiro Askar Kenyaati iyo Soomaali ah.
Dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa uu soconayay in muda ah, iyadoona dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isku adeegsanayeen laga maqlayay goobo ka baxsan halka lagu dagaallamay.
Wuxuu dagaalku sidoo kale saameyn ku yeeshey ciidamada maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe oo Shisheeyha Kenyaatiga ku wehliya duulaanka ay ku qabsadeen Husiingow iyo deegaannada lamidka ah ee Jubbooyinka.
Qarax saaka ka dhacay Husiingow, kana dhacay goob ay fadhiyeen ciidamo katirsan Kenyaatiga iyo Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashey oo wada gaaray malleeshiyaadka Soomaalida iyo Kenyaatiga.
Husiingow waxay dhacdaa xuduud beenaadka, dhowrjeerna waxay marti gelisya dagaallo iyo iska hor imaadyo toos ah oo dhexmaray ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo Kenyaatiga.